'दोष संघीयता र गणतन्त्रलाई होइन, जनप्रतिनिधिलाई दिऊँ'
देशमा दुई तिहाइको सरकार आएपछि अब स्थायित्व प्राप्त भयो भनियो । तर मानसिकरुपमा भने हामी अझै अस्थिर छौँ । अझै दुई-तीन वर्ष हाम्रो मानसिकता उथलपुथलमा नै रहनेछ ।
नेपाल एक विशिष्ट खालको मुलुक हो जहाँ परिवर्तन आइरहेको छ । नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान छ । गणतन्त्र प्राप्ति सानो उपलब्धि होइन । राजतन्त्र जान्छ भनेर कसैले सोचेको थियो ? यति चाँडै, यति सजिलै राजा जान सक्छन् भनेर हामीले अनुमाननै गरेको थिएनौँ । एकाथरी मानिसहरु थिए, उनीहरु राजा नभए देश डुबिहाल्छ, देश नै भताभुङ्ग भइहाल्छ, चक्नाचुर भइहाल्छ भन्ने मानसिकता लिएर आएका छौँ । तीन सय वर्षको इतिहास बोकेर आएकोले त्यो स्वभाविक पनि थियो ।
संसारका कत्रा–कत्रा साम्राज्यहरु आए, गए यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । राणाशासन जाँदा म विराटनगरमा तीन कक्षाको विद्यार्थी थिएँ । २००७ सालको क्रान्ति झलझल सम्झन्छु । राणाशासन ढलेपछि पनि राणशासन फेरि आउँछ, यसका बारेमा केही नबोल, काटेर चुक दलिदेला भन्ने मानसिकता थियो । अहिले पनि त्यस्तै मानसिकता होला । राजा फर्किएला, फलानो आउँला, यस्तो होला भनेर । त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा यस्तो मानसिकताले बेलाबेला त्रर्साउने गरेको छ ।
यो संघीयता किन आयो भन्नेबारे मर्म पनि बुझ्नुपर्छ । नेपालमा संघीयता आउनुको रहस्यबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चार–पाँच जना नेता मात्र बसेर यहाँ गणतन्त्र आएको होइन, सातवटा प्रान्त बनेको होइन । गणतन्त्र आउनुअघि नेपालको राजनीति काठमाडौँकेन्द्रीत थियो । म झापाको मान्छे, तर पढ्न र जागिर खान काठमाडौँ नै आउनुपर्‍यो । पियनको जागिर खान पर्‍यो काठमाडौं आउनुपर्ने, पासपोर्ट बनाउन यही आउनुपर्ने स्थिति थियो । अहिले पनि देशभरका मान्छेहरु काठमाडौँमा छौँ । किन भन्दा जिल्लामा सुविधा छैन । मान्छे अगाडि बढ्न खोज्छ । त्यो अवसर त्यहाँ छैन । अवसर खोज्दै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । सबै नेपाल काठमाडौँमै सिमित छ । यसको पछाडिको कारण केन्द्रीकृत राज्यको उपज हो । त्यही भएर नेपालमा संघीयताको माग उठेको हो ।
प्रा‌.डा. लोकराज बराल
यहाँ गणतन्त्र काम लाग्दैन भनिँदैछ । गणतन्त्र विचरा के गरोस्, हामी आफै काम लाग्दैनौँ । सरकारमा पुगेर डाडुपन्यु हातमा परेपछि सबै वाचा बिर्सन्छौँ । अनि गणतन्त्रलाई दोष दिएर हुन्छ ? त्यसैले अब हाम्रो प्रतिनिधिले काम गरेन भन्नुपर्छ । व्यवस्था होइन, आफ्नै प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संघीयता ‘पि-म्याचुअर्ड’ छ । यसको बारेमा हामीले एक वर्षको त अनुभाव गरेका छौँ । कानुनहरु बनिरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कहाँ–कहाँ के हुने भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै संघीयता चल्छ वा चल्दैन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने समय भएको छैन । अहिले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने विकल्प मात्रै हो । संघीयता काम लाग्दैन भन्ने एकथरीको आवाज आएको छ । तर, हामीले अहिले अर्को विकल्प सोच्ने कुरा आउँदैन ।
छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्‍यौँ भने विभिन्न चरणमा भारतमा विखण्डन हुन लाग्यो भनेर संघीयतालाई चर्चा गरिन्थे । संघीय संरचनाले कहाँ विखण्डन गर्यो त ? बरु नयाँ खालको विकास भएको छ । प्रदेशहरुले आफ्नो पहिचान राखेका छन् । स्थानीय पहिचानका लागि समेत अवसर पाएका छन् । भारतको आन्द्र प्रदेशमा संघीयता कै विषयलाई लिएर क्षेत्रीय पार्टीले आन्दोलन गर्दा इन्द्रीरा गान्धीले ‘भारतलाई विखण्डन गर्छ’ भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो । तर क्षेत्रीय पार्टीले गरेको आन्दोलनले विखण्डन नभइ विकास गरिदियो ।
यहाँ गणतन्त्र काम लाग्दैन भनिँदैछ । गणतन्त्र विचरा के गरोस्, हामी आफै काम लाग्दैनौँ । सरकारमा पुगेर डाडुपन्यु हातमा परेपछि सबै वाचा बिर्सन्छौँ । अनि गणतन्त्रलाई दोष दिएर हुन्छ ? गणतन्त्रले त हामीलाई यहाँसम्म पुर्‍याइदिएको छ । त्यसैले अब हाम्रो प्रतिनिधिले काम गरेन भन्नुपर्छ । व्यवस्था होइन, आफ्नै प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ ।
(नेपाली काँग्रेसद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनका चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा.डा. बरालद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)